Bit By Bit - Okwu Mmalite - 1.2 Welcome to dijitalụ afọ
Oge di omimi di ebe nile, o na etolite, o na-agbanwe kwa ihe ndi kwere nyocha puru ime.
Isi okwu nke akwụkwọ a bụ na oge dijitalụ na-emepụta ohere ọhụụ maka nchọpụta mmadụ. Ndị na-eme nchọpụta nwere ike ịhụ omume, jụọ ajụjụ, gbalịa ịnwale, ma jikọta ya n'ụzọ ndị na-agaghị ekwe omume n'oge gara aga. Tinyere ohere ọhụrụ ndị a na-eweta ihe ize ndụ ọhụrụ: ndị nchọpụta nwere ike imerụ ndị mmadụ ugbu a n'ụzọ ndị na-agaghị ekwe omume n'oge gara aga. Isi iyi nke ohere na ihe ize ndụ ndị a bụ mgbanwe site na afọ analog na afọ dijitalụ. Mgbanwe a emeghị ihe niile n'otu oge-dị ka ntụgharị ọkụ na-agbanye na, na, n'eziokwu, ọ kachabeghị. Otú ọ dị, anyị ahụla ugbu a na anyị maara na nnukwu ihe na-aga n'ihu.
Otu ụzọ ị ga-esi hụ mgbanwe a bụ ịchọ mgbanwe maka ndụ gị kwa ụbọchị. Ọtụtụ ihe na ndụ gị nke na-ejikarị analog eme ihe ugbu a. Ma eleghị anya, ị na-eji igwefoto eme ihe na fim, ma ugbu a ị na-eji igwefoto dijitalụ (nke nwere ike ịbụ akụkụ nke ekwentị smart gị). Ma eleghị anya, ị na-agụ akwụkwọ akụkọ anụ ahụ, ma ugbu a, ị na-agụ akwụkwọ akụkọ n'Ịntanet. Ma eleghị anya, ị na-eji ugwo ego kwụọ ụgwọ, ma ugbu a ị na-akwụ ụgwọ na kaadị akwụmụgwọ. Na nke ọ bụla, ngbanwe site na analog na dijitalụ pụtara na achọtara data gbasara gị ma chekwaa echekwa.
N'ezie, mgbe a na-ele ya anya, mmetụta nke mgbanwe dị ịtụnanya. Ọnụ ọgụgụ nke ozi n'ụwa na-arịwanye elu ngwa ngwa, a na-echekwara ihe ọmụma ndị ọzọ na ntanetị, nke na-enyere nyocha, nnyefe, na ijikọta (nọmba 1.1). Akwukwo ozi di omimi a abia na-akppo "data buru ibu." Na mgbakwunye na mgbawa nke ihe omuma di omimi, enwere uzo yiri uzo iji nweta ike ichikota (onu ogugu 1.1). Ihe ndị a na-arịwanye elu nke data dijitalụ na ịnweta ịdị na-eme atụmatụ-nwere ike ịnọgide na-aga n'ihu n'ọdịnihu.
Onu ogugu 1.1: Ike nchekwa ozi na ike ichikota na abawanye uzo. Ọzọkwa, nchekwa data dị ugbu a dị ka dijitalụ. Mgbanwe ndị a mepụtara ohere dị egwu maka ndị na-eme nchọpụta mmadụ. E si n'aka Hilbert and López (2011) , ọnụ ọgụgụ nke 2 na 5.
Maka ebumnuche nke nchọpụta ọha na eze, echere m na akụkụ kachasị mkpa nke afọ dijitalụ bụ kọmputa n'ebe niile . Na-amalite dị ka igwe ọrụ dị n'ime ụlọ ndị gọọmenti na ụlọ ọrụ buru ibu, kọmputa ejirila nwayọọ nwayọọ na-arịwanye elu. Onye ọ bụla afọ iri ebe ọ bụ na 1980s hụrụ a ọhụrụ ụdị Mgbakọ iputa: kọmputa, Laptọọpụ, smart phones, na ugbu a agbakwunyere processors na "Internet Ihe" (ie, kọmputa n'ime ngwaọrụ dị ka ụgbọala, ese, na thermostats) (Waldrop 2016) . N'ụzọ dị njọ, kọmputa ndị a na-arụ ọrụ ubi na-eme ihe karịrị nanị gbakọọ; ha na-ahụkwa, chekwaa, ma kesaa ozi.
Maka ndị nchọpụta, ihe ọ pụtara na ọnụnọ nke kọmputa n'ebe niile dị mfe iji hụ na ịntanetị, gburugburu ebe obibi zuru ezu ma nwee ike ịnwale. Dịka ọmụmaatụ, ụlọ ahịa dị n'ịntanetị nwere ike ịnakọta data doro anya nke ọma banyere usoro ịzụ ahịa nke ọtụtụ nde ndị ahịa. Ọzọkwa, ọ nwere ike ịkụnye ìgwè dị iche iche nke ndị ahịa n'ụzọ dị mfe iji nweta ụdị ahụmahụ dị iche iche. Nke a nwere ike ịkụda mmiri n'elu nsonaazụ pụtara na ụlọ ahịa na-echekwa na ị nwere ike na-agba ọsọ mgbe niile. N'ezie, ọ bụrụ na ị zụtala ihe ọ bụla site na ụlọ ahịa na-edebe ihe n'Ịntanet, a kpachapụrụ àgwà gị na ị ga-esonye na nnwale ahụ, ma ị maara ma ọ bụ na ị maghị ya.
Ụwa a zuru ezu, zuru ụwa ọnụ nke nwere ike ịmepụta ihe ọ bụghị nanị na ịntanetị; ọ na-emewanye ebe nile. Ụlọ ahịa anụ ahụ na-anakọta data zuru ezu zuru ezu zuru ezu, ha na-azụlitekwa akụrụngwa iji nyochaa omume ndị ahịa na ịzụ ahịa na itinye aka na nnwale n'ime ọrụ azụmahịa. The "Internet of Things" pụtara na omume na ụwa nkịtị ga-esiwanye weghaara site na dijitalụ sensọ. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, mgbe ị na-eche gbasara nchọpụta mmadụ na afọ elekere ọgbọ ị ga-echeghị n'entanetị , ị kwesịrị iche echiche ebe niile .
Na mgbakwunye na ime ka omume nke omume na ịkpachara anya na ọgwụgwọ, afọ dijitalụ emewokwa ka ndị mmadụ nwee ike ikwurịta okwu. Ụdị nkwurịta okwu ọhụrụ a na-enye ndị na-eme nchọpụta ohere ịme nyocha ọhụụ na ime ka ha na ndị ọrụ ibe ha na ọha na eze rụọ ọrụ.
Onye nwere obi abụọ nwere ike ịkọwa na ọ dịghị otu n'ime ọrụ ndị a dị ọhụrụ. Nke ahụ bụ, na n'oge gara aga, enwere ọganihu ndị ọzọ dị ukwuu na ikike ndị mmadụ na-ekwurịta okwu (dịka, telegraph (Gleick 2011) ), kọmputa na-agbakwa ngwa ngwa n'otu oge ahụ kemgbe 1960 (Waldrop 2016) . Ma ihe nke a na-atụghị anya ya bụ na n'otu akụkụ ụfọdụ nke otu ahụ na-aghọ ihe dị iche. Nke a bụ ihe atụ m na-amasị (Halevy, Norvig, and Pereira 2009; Mayer-Schönberger and Cukier 2013) . Ọ bụrụ na ị nwere ike ijide oyiyi nke ịnyịnya, ị nwere foto. Na, ọ bụrụ na ị nwere ike weghara 24 oyiyi nke ịnyịnya kwa nke abụọ, mgbe ahụ i nwere ihe nkiri. N'ezie, ihe nkiri bụ nanị ụyọkọ foto, ma ọ bụ naanị onye nwere obi abụọ na-ekwu na foto na fim dị otu.
Ndị nchọpụta nọ na-eme mgbanwe maka mgbanwe site na foto gaa na cinematography. Otú ọ dị, mgbanwe a apụtaghị na ihe niile anyị mụtara n'oge gara aga kwesịrị ileghara anya. Dịka ụkpụrụ nke foto na-agwa ndị na-ese onyinyo fim, ụkpụrụ nke nchọpụta mmekọrịta ndị e mepụtara na narị afọ 100 gara aga ga-eme ka nchọpụta mmekọrịta mmadụ na-eme n'ime afọ 100 sochirinụ. Ma, mgbanwe ahụ pụtakwara na anyị ekwesịghị ịdị na-eme otu ihe ahụ. Kama nke ahụ, anyị ga-ejikọta ụzọ ndị gara aga na ike nke ugbu a na n'ọdịnihu. Dịka ọmụmaatụ, nchọpụta banyere Joshua Blumenstock na ndị ọrụ ibe ya bụ ngwakọta nke nchọpụta nyocha nke ọdịnala na ihe ụfọdụ nwere ike ịkpọ sayensị data. Ihe abụọ ndị a dị mkpa: ọ bụghị nzaghachi nyocha ahụ ma ọ bụ ndekọ ndekọ nke onwe ha zuru ezu iji mepụta atụmatụ dị elu nke ịda ogbenye. N'ikpeazụ, ndị na-eme nchọpụta mmekọrịta ga-ejikọta echiche sitere na sayensị mmekọrịta na sayensị data iji nweta ohere nke oge dijitalụ; ọ bụghị naanị ya ga-ezu.